Yan Aung: ငါးသေတ္တာမွှေးမွှေးလေး စားကြမယ်ဗျို့…
မောင်ရန်တို့ကတော့ ဟင်းအမျိုးမျိုးပါလားး) အစ်မ အိုင်အီးကိစ္စ မအားတဲ့ကြား ကြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲ ။ မင်းဘလောဂ့်ဖတ်ရတာ real-time diary လိုပဲ ဟားဟား ။ ဒါနဲ့ အစ်မက ငါးသေတ္တာလုံးဝ မစားဘူးကွ ။ ဟင်းနည်းနည်းချီးများတဲ့ထဲ ပါတယ်း)မင်းကျွေးချင်ရင်တော့ နောက်တမျိုး စဉ်းစားလိုက်ဦး ။
ဒီတခါ ဓါတ်ပုံက ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီ ။ အထင်တော့ မင်းက ရေမလည် ဆီမလည်ပုံစံ ဟင်းတွေ အချက်များတယ် ထင်တယ် ။
မနက်ကျရင် သေနတ်သံကြားတာလား ပြောဦးနော် ။ Take care of urself & keep studying!! :)
ကိုယ့်အစ်မကြီး ဘာစားချင်လဲပြော. Recipe ကို Google လုပ်ပြီးတော့ကုို ရှာချက်ကျွေးဦးမှာ.
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာ. ကျွန်တော့်ဟင်းတွေက ရေမလည် ဆီမလည်တွေ များပါတယ်. ဒါပေမယ့် ချက်တတ်သလောက်တော့ ချက်ရတာပေါ့ဗျာ. ဟုတ်ဖူးလား.
သေနတ်သံလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတော့ အသေအချာပဲ. အရင်နှစ်ကလည်း ပစ်တဲ့သူတွေ လက်သည် မပေါ်ဘူးဗျ. ဒီမှာက လူတိုင်းနီးပါးလောက် သေနတ်ကိုင်နေကြတယ်လေ. ကျွန်တော်လည်း တစ်လက်လောက် ၀ယ်မလား စဉ်းစားနေတယ်.
ကျွန်တော်ချက်တဲ့ ဟင်း မကောင်းဘူးဆိုတဲ့သူတွေကို ပစ်မလို့.
မဂျစ်ကြီးကို အရင်ပစ်ပြီဗျာ... Bang Bang Bang!